ရိပ်သာလေး စားဝတ်နေရေး အရမ်း ကို ကြပ်တည်းပြီး ချေးငှား၊ ကြွေးခံပြီးတောင် ဖြေရှင်း ရတော့မယ် အနေအထားရောက်နေ လို့ အလှုခံပါရစေ – Let Pan Daily
ပုံ့က အညတရ မိန်းကလေးပါ… နံမည်လဲ မကြီး ဂုဏ်လဲ မကျော်ဇော်တာမို့ အလှုငွေလဲ အများကြီး မရပါဘူး…ပုံ့ အမြဲ အခက်အခဲလေး တွေကို ညည်းပြ အလှုခံပြီး ရလာတဲ့ ငွေလေးကို ခြစ်ခြစ်ကုတ်ကုတ် စနစ်တကျစုပြီး အဘိုးအဖွားတွေကို ကောင်းကောင်းလေး ထားပြီး စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်…ပုံ့ ရိုးရိုးသားသားလေးဘဲ ရပ်တည်ခဲ့လို့ အေးချမ်းရပေမဲ့ အညတရမို့ အခက်အခဲတွေတော့ အများကြီးရင်ဆိုင် ရပါတယ်…။
ခုလဲ ပုံ့ရိပ်သာလေး စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲကြုံနေရပါပြီ…ပုံ့တို့ကို တတ်နိုင်သလောက်လေး ကူညီပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ အလှုခံပါ ရစေရှင်….မလှုဖြစ်သေးရင်လဲ ဒီပိုစ့်လေးကို အလှုရှင်တွေသိအောင် ကူညီပြီး Share ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေရှင်…… ပုံ့တို့ရိပ်သာလေး အရမ်းကိုကြပ်တည်း လာနေလို့ အလှုလေးခံပါရစေရှင်…ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိတဲ့ မိသားစုတွေတောင် ဒီအချိန်မှာခက်ခဲနေကြတာ…ပုံ့တို့လို သူများ လှုမှ တန်းမှ စားရတဲ့ ရိပ်သာလို နေရာမျိုးအတွက်တော့ စားဝတ်နေရေး အရမ်းကို ကြပ်တည်းလွန်းလို့ ချေးငှား၊ ကြွေးခံပြီးတောင် ဖြေရှင်း ရတော့မယ် အနေအထားပါရှင်….။
ပုံ့တို့ ရိပ်သာမှာရှိတဲ့ အဘိုးအဖွားနဲ့ ကလေး စုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရဲ့ တလ ပျမ်းမျှ ကုန်ကျငွေက သိန်း ၈၀ နဲ့ ၁၀၀ ကြားရှိပါတယ်ရှင်.. ။.ဆန်၊ ဆီ အပါအဝင်ဆို စားစရိတ်တင် တလလျှင် ကုန်ကျစရိတ် သိန်း ၅၀ ကျော်ရှိတာပါ…။ဝန်ထမ်းလစာ၊ ဆေးဖိုး၊ မီတာခ၊ ဆေးရုံစရိတ်၊ သန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်းဖိုး စတာတွေကလဲ မထွက်မဖြစ်ထွက်နေရတဲ့အရာတွေမို့ ၈၂ သိန်းဆိုတဲ့လဟာ အနည်းဆုံးလပါ…. ပုံ့တို့ ကပ်ရောဂါ ကြီး စတင်ချိန်မှစပြီး တလကျော်လောက်တော့ အလှုရှင်တွေကလဲ တဖွဲဖွဲလေးလာသေးတော့ ဒီစရိတ်တွေကို ထိန်းထားနိုင် ခဲ့ပါတယ်…။
ဒါပေမဲ့ ဒီလတော့ အဘိုးအဖွား တို့ စားဖို့ တနေ့တာ အာဟာရဒါနတောင် ၁၀ ရက် ခန့်သာ အလှုရှင်ရှိပါတယ်… ပိုက်ဆံမရှိပေမဲ့ ဂီလာန တွေကြီးဘဲမို့ ဆေးနဲ့ လူနဲ့လဲပြတ်လို့ မဖြစ်တာကြောင့် အောက်မှာပြထားသလို ဒီလအတွက် ကုန်ကျတဲ့ ဆေးစရိတ်တွေကိုလည်း မပေး နိုင်လို့ အကြွေး ထားထား ရပါတယ်… မီတာခကလဲ ဒီလ ဘာဖြစ်တယ် မသိပါဘူး…စုစုပေါင်း ၆ သိန်းကျော်တောင် ကျပါတယ်… ။အရင်လ တွေက ၄ သိန်းကျော်သာ ကျတာပါ… မနက်ဖြန်ဆို မီတာခ ဆောင်ရတော့မှာပါ…။
ဒါပေမဲ့ ပုံ့တို့မှာ ဆောင်စရာငွေမရှိ ပါဘူး…ဘဏ်က ထုတ်ရပါအုံးမယ်…။ပုံ့က ရသမျှ ငွေလေးတွေကို ခြစ်ခြစ် ကုတ်ကုတ်စုပြီး ရိပ်သာ လေးကို အခိုင်အမာဖြစ်အောင် အရင်ဆောက်ခဲ့တာပါ…လမ်းဘေးမှာ ပူလောင်ခဲ့ရသူတွေကို လုံလုံခြုံခြုံအေးအေးချမ်းချမ်းလေး နေစေ ချင်ခဲ့တာပါ…။ ဒါကြောင့် ရိပ်သာလေးကြည့်ရင်တော့ အဟန့်လေးရှိပြီး အထင်ကြီးစရာပါ…ဒါပေမဲ့ ရသမျှငွေဟာ ရိပ်သာဆောက်ရတာ ရယ်…တည် ထောင်ကာစ ရိပ်သာဖြစ်တာရယ်ကြောင့် ပုံ့တို့မှာ ဘဏ်မှာအပ်ရတဲ့ ငွေပိုငွေလျှံရယ်လို့ များများစားစားမရှိနေပါဘူး…။
ဒီလိုသာထုတ်သုံးနေ ရရင် လအနည်းငယ် နဲ့ ဟိုးရိပ်သာစဆောက်တုံး ကလို ပုံ့တို့ ဖလားတွေကိုင် လမ်းပေါ်ထွက်ရတော့မှာပါ…. ။တချို့ သူတွေကပြောပါတယ်… ရိပ်သာဆောက်ချိန်ဆို အလှုရှင်ရတယ်၊ ပြီးရင် အလှုရှင်နည်းသွားရောတဲ့…ဒါကြောင့် ငွေကို အရင်စုဖို့ စုတ်စုတ် ပြတ်ပြတ်နေ ရတဲ့ အဘိုးမဖွားတွေဘဝကို ပြပြီး အလှုခံခိုင်းပါတယ်…ပုံ့ အဲ့လို မလုပ်ခဲ့ပါဘူး… ပုံ့ ကောင်းကောင်းထားချင်လို့ စောင့် ရှောက်ခဲ့တာပါ…။
ငွေရှိလဲ သူတို့တွေ ဆင်းရဲနေရင် အဲ့ငွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာဟာ အလကားပါ…ဒါကြောင့် အစုတ်ဘဝက အမြန်ဆုံးရုန်းထွက် ခဲ့ပါတယ်… ။နောက်ပြီး အလှုရှင်တွေက ရိပ်သာဆောက်ဖို့လှုတာ ဆောက်တဲ့အထဲဘဲ ပုံ့သုံးချင်ပါတယ်….။
အဓိက လိုအပ်နေတာ ကတော့…
-ငွေကြေး(ဝန်ထမ်းလစာ၊ မီတာခ စသည်များ ဖြေရှင်းရန်…)
-ဆေးဖိုး။-ဆန်။-ဆီ။-နို့မှုန့်။-ဒိုက်ပါ။-တနေ့တာ အာဟာရဒါန နှင့်-သန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်း တွေ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်….။
မသင်းရွှေစင်လှိုင် 09795929849, ။ 09791770770 ။ 09773333368
REF: THIN SHWE SIN HLAING
ပုံ့က အညတရ မိနျးကလေးပါ… နံမညျလဲ မကွီး ဂုဏျလဲ မကြျောဇျောတာမို့ အလှုငှလေဲ အမြားကွီး မရပါဘူး…ပုံ့ အမွဲ အခကျအခဲလေး တှကေို ညညျးပွ အလှုခံပွီး ရလာတဲ့ ငှလေေးကို ခွဈခွဈကုတျကုတျ စနဈတကစြုပွီး အဘိုးအဖှားတှကေို ကောငျးကောငျးလေး ထားပွီး စောငျ့ရှောကျခဲ့ပါတယျ…ပုံ့ ရိုးရိုးသားသားလေးဘဲ ရပျတညျခဲ့လို့ အေးခမျြးရပမေဲ့ အညတရမို့ အခကျအခဲတှတေော့ အမြားကွီးရငျဆိုငျ ရပါတယျ…။
ခုလဲ ပုံ့ရိပျသာလေး စားဝတျနရေေး အခကျအခဲကွုံနရေပါပွီ…ပုံ့တို့ကို တတျနိုငျသလောကျလေး ကူညီပေးကွပါလို့ မတ်ေတာရပျခံ အလှုခံပါ ရစရှေငျ….မလှုဖွဈသေးရငျလဲ ဒီပိုဈ့လေးကို အလှုရှငျတှသေိအောငျ ကူညီပွီး Share ပေးပါလို့ တောငျးဆိုပါရစရှေငျ…… ပုံ့တို့ရိပျသာလေး အရမျးကိုကွပျတညျး လာနလေို့ အလှုလေးခံပါရစရှေငျ…ကိုယျပိုငျလုပျငနျးရှိတဲ့ မိသားစုတှတေောငျ ဒီအခြိနျမှာခကျခဲနကွေတာ…ပုံ့တို့လို သူမြား လှုမှ တနျးမှ စားရတဲ့ ရိပျသာလို နရောမြိုးအတှကျတော့ စားဝတျနရေေး အရမျးကို ကွပျတညျးလှနျးလို့ ခြေးငှား၊ ကွှေးခံပွီးတောငျ ဖွရှေငျး ရတော့မယျ အနအေထားပါရှငျ….။
ပုံ့တို့ ရိပျသာမှာရှိတဲ့ အဘိုးအဖှားနဲ့ ကလေး စုစုပေါငျး ၁၀၀ ကြျောရဲ့ တလ ပမျြးမြှ ကုနျကငြှကေ သိနျး ၈၀ နဲ့ ၁၀၀ ကွားရှိပါတယျရှငျ.. ။.ဆနျ၊ ဆီ အပါအဝငျဆို စားစရိတျတငျ တလလြှငျ ကုနျကစြရိတျ သိနျး ၅၀ ကြျောရှိတာပါ…။ဝနျထမျးလစာ၊ ဆေးဖိုး၊ မီတာခ၊ ဆေးရုံစရိတျ၊ သနျ့ရှငျးရေး ပစ်စညျးဖိုး စတာတှကေလဲ မထှကျမဖွဈထှကျနရေတဲ့အရာတှမေို့ ၈၂ သိနျးဆိုတဲ့လဟာ အနညျးဆုံးလပါ…. ပုံ့တို့ ကပျရောဂါ ကွီး စတငျခြိနျမှစပွီး တလကြျောလောကျတော့ အလှုရှငျတှကေလဲ တဖှဲဖှဲလေးလာသေးတော့ ဒီစရိတျတှကေို ထိနျးထားနိုငျ ခဲ့ပါတယျ…။
ဒါပမေဲ့ ဒီလတော့ အဘိုးအဖှား တို့ စားဖို့ တနတေ့ာ အာဟာရဒါနတောငျ ၁၀ ရကျ ခနျ့သာ အလှုရှငျရှိပါတယျ… ပိုကျဆံမရှိပမေဲ့ ဂီလာန တှကွေီးဘဲမို့ ဆေးနဲ့ လူနဲ့လဲပွတျလို့ မဖွဈတာကွောငျ့ အောကျမှာပွထားသလို ဒီလအတှကျ ကုနျကတြဲ့ ဆေးစရိတျတှကေိုလညျး မပေး နိုငျလို့ အကွှေး ထားထား ရပါတယျ… မီတာခကလဲ ဒီလ ဘာဖွဈတယျ မသိပါဘူး…စုစုပေါငျး ၆ သိနျးကြျောတောငျ ကပြါတယျ… ။အရငျလ တှကေ ၄ သိနျးကြျောသာ ကတြာပါ… မနကျဖွနျဆို မီတာခ ဆောငျရတော့မှာပါ…။
ဒါပမေဲ့ ပုံ့တို့မှာ ဆောငျစရာငှမေရှိ ပါဘူး…ဘဏျက ထုတျရပါအုံးမယျ…။ပုံ့က ရသမြှ ငှလေေးတှကေို ခွဈခွဈ ကုတျကုတျစုပွီး ရိပျသာ လေးကို အခိုငျအမာဖွဈအောငျ အရငျဆောကျခဲ့တာပါ…လမျးဘေးမှာ ပူလောငျခဲ့ရသူတှကေို လုံလုံခွုံခွုံအေးအေးခမျြးခမျြးလေး နစေေ ခငျြခဲ့တာပါ…။ ဒါကွောငျ့ ရိပျသာလေးကွညျ့ရငျတော့ အဟနျ့လေးရှိပွီး အထငျကွီးစရာပါ…ဒါပမေဲ့ ရသမြှငှဟော ရိပျသာဆောကျရတာ ရယျ…တညျ ထောငျကာစ ရိပျသာဖွဈတာရယျကွောငျ့ ပုံ့တို့မှာ ဘဏျမှာအပျရတဲ့ ငှပေိုငှလြှေံရယျလို့ မြားမြားစားစားမရှိနပေါဘူး…။
ဒီလိုသာထုတျသုံးနေ ရရငျ လအနညျးငယျ နဲ့ ဟိုးရိပျသာစဆောကျတုံး ကလို ပုံ့တို့ ဖလားတှကေိုငျ လမျးပျေါထှကျရတော့မှာပါ…. ။တခြို့ သူတှကေပွောပါတယျ… ရိပျသာဆောကျခြိနျဆို အလှုရှငျရတယျ၊ ပွီးရငျ အလှုရှငျနညျးသှားရောတဲ့…ဒါကွောငျ့ ငှကေို အရငျစုဖို့ စုတျစုတျ ပွတျပွတျနေ ရတဲ့ အဘိုးမဖှားတှဘေဝကို ပွပွီး အလှုခံခိုငျးပါတယျ…ပုံ့ အဲ့လို မလုပျခဲ့ပါဘူး… ပုံ့ ကောငျးကောငျးထားခငျြလို့ စောငျ့ ရှောကျခဲ့တာပါ…။
ငှရှေိလဲ သူတို့တှေ ဆငျးရဲနရေငျ အဲ့ငှေ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားတာဟာ အလကားပါ…ဒါကွောငျ့ အစုတျဘဝက အမွနျဆုံးရုနျးထှကျ ခဲ့ပါတယျ… ။နောကျပွီး အလှုရှငျတှကေ ရိပျသာဆောကျဖို့လှုတာ ဆောကျတဲ့အထဲဘဲ ပုံ့သုံးခငျြပါတယျ….။
အဓိက လိုအပျနတော ကတော့…
-ငှကွေေး(ဝနျထမျးလစာ၊ မီတာခ စသညျမြား ဖွရှေငျးရနျ…)
-ဆေးဖိုး။-ဆနျ။-ဆီ။-နို့မှုနျ့။-ဒိုကျပါ။-တနတေ့ာ အာဟာရဒါန နှငျ့-သနျ့ရှငျးရေး ပစ်စညျး တှေ ဖွဈပါတယျရှငျ….။
မသငျးရှစေငျလှိုငျ 09795929849, ။ 09791770770 ။ 09773333368
အသကျမှီရဲ့သား နဲ့ ဒလနျကွောငျ့ အသကျတဈခြောငျး ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ ပွညျက ရကွေောငျးတက်ကသိုလျပထမနှဈကြောငျးသားလေး